Mweya Mutsva we Africa Une Shamwari Itsva: Iyo African Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Mweya Mutsva we Africa Une Shamwari Itsva: Iyo African Tourism Board
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
Mufananidzo Chikwereti Kalo Media
African Tourism Board (ATB) iri kutora humiriri hweAfrican Tourism munzira inokurumidza. Sachigaro weATB Cuthbert Ncube parizvino ari muguta guru reEthiopia reAddis Ababa musangano nevatungamiriri veEthiopian Airlines.
Sachigaro weAfrican Tourism Board, VaCuthbert Ncube, vari muAddis Ababa parwendo rwekushanya vakasangana navo Mai Mahlet Kebede, Musoro weEthiopiya Airlines ET Mahoridhe.
Pakushanyira iyo Ethiopian Airlines dzimbahwe, Ncube akagariswa nemamishinari eATB Hiwotie Anberbir naKazeem Balogun.
Vatungamiriri vaviri ava vakabvumirana pakakosha kuti maEthiopian Airlines neAfrican Tourism Board vashande pamwe chete.
Cuthbert Ncube akati: “African Tourism Board inotsigira kumiswazve nekumiswazve kweAfrica nenzira yakabatana. Zvinoreva kuti isu tinofanirwa kuzadzikisa izvi nevakabatana nesu seEthiopian Airlines. Ethiopian Airlines inozivikanwa sendege ine zita rekuti 'Kudada kweAfrica.' Tese pamwe chete tinogona kuzadzikisa kurota kwemadzitateguru edu ekubatanidza Africa vachishandisa zvekushanya sechishandiso chekutyaira. ”
Sezvo yaita chinzvimbo chakakosha muEast Africa Regional Tourism Expo 2021 mu Arusha Tanzania, ATB yakagadzirira kuona kushanya kuchipora nokukurumidza.
Kebede akati, "Pakazosvika 2022, tinotarisira kuisa sangano rako mune zviitiko zvedu karenda munzvimbo dzekushanya kwakasiyana siyana mukati mekondinendi. "
"Nekudyidzana uku, African Tourism Board neEthiopian Airlines vachange vakagadzwa zvine hungwaru kuti vape nzvimbo yakasimba yekufambisa pamwe neyekushanya mune post-COVID-19 era. COVID yakatipa mukana wekudzokera kubhodhi rekudhirowa maitiro ekuisa maitiro akanakisa muchirongwa chezvinhu, ”Ncube akawedzera.
Kune nzvimbo zhinji dzekufarira. Memorandum of Understanding inofanirwa kusainwa pakati pemasangano maviri aya kuitira kuti vazivise zviri pamutemo kudyidzana uku pakati pendege iyi yeStar Alliance neATB.
Kutarisana nedenda re COVID-19, Ethiopian Airlines yanga ichishanda nesimba kusimudzira kushanya kwenzvimbo mukati me Africa zvakanyanya.
Ndege yehurumende yave iri nhengo yeInternational Air Transport Association (IATA) kubvira 1959 uye yeAfrican Airlines Association (AFRAA) kubvira 1968.
Itiopiya inhengo yeStar Alliance, yapinda muna Zvita 2011. Iyo sirogani yekambani iri Mweya Mutsva we Africa. Musimboti weEthiopia pamwe nemuzinda wake zviri kuBole International Airport muAddis Ababa, kubva kwainoshandira dandemutande renzvimbo 125 dzevapfuuri - makumi maviri acho ari epamba uye makumi mana nemana ekuenda kunofamba.
The African Tourism Bhodhi yakatanga kusimbiswa muna 2018 neAfrica Tourism Marketing Group muUnited States. ATB yakavakirwa muHumambo hweEswatini. Chinangwa cheATB ndechekusimudzira Africa senzvimbo imwechete yekutanga kushanya.
Iyo African Tourism Board mubatanidzwa wezano we World Tourism Network.